DAAWO:- Xisbiga Wadani oo mucjiso kutilmaamay kala hadalka madaxda Somaliland “Markabka yaa sii daayay?”. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO:- Xisbiga Wadani oo mucjiso kutilmaamay kala hadalka madaxda Somaliland “Markabka yaa sii daayay?”.
DAAWO:- Xisbiga Wadani oo mucjiso kutilmaamay kala hadalka madaxda Somaliland “Markabka yaa sii daayay?”.
July 16, 2019 marqaan Maqal Iyo Muuqaal, Somaliland, Wararka maanta 9
Xubin katirsan xisbiga Mucaaradka Somaliland ee WADANI oo saxaafadda la hadlay ayaa la yaab kutilmaamay dhowrka hadal ee isburinaya ee kasoo kala yeedhay masuuliyiin katirsan maamulka Somaliland kuwaas oo kusaabsan qaabkii loosii daayay Markiibkii xoolaha kadaabulay dekadda Barbara ee dhowrka maalin ku xayirnaa dekad kutaal dalka Sucuudiga.
Ugu yaraan dhowr masuul oo xilal sare kahaya maamulka Hargaysa ayaa siyaabo kala duwan ufasiray qaabkii lagu sii daayay markabkaasi saarnaa Xoolaha.
Xisbiga Wadani ayaa fashil cad kutilmaamay kala hadalka madaxda iyo iska warqab la’aanta iyadoona uu tilmaamay in ficilada nuucaasi ah ay dadka ku abuurayaan shaki badan.
hadalka xisbiga wadani ayaa kusoo aadaya xilli Somaliland markab ka daabulay xoolo badan lagu xayiray dekad kutaal sucuudiga balse DFS ay dadaal ku bixisay in lasii daayo wallow xukuumadda Hargaysa laga waayay in ay mahad celi kasameeyso caawintaasi ay ka heshay Muqdisho.
Farmaajo oo kabixi kari waayay muqdisho.
Kadib markii ay kenya ka mamnùucday hawadeeda.kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
waxuu qorshuhu ahaa inu kaqayb galo
Shir shalay ka dhacay ruwanda
lkn wuu awoodi kari waayay inuu usafro Kigali.kkkkkkkkkkkkkkk
1.Taas waa la sheegay in uu Ina farmaajo mari waayey hawada kenya.
Laakiin Muuse Biixiba ma awooodo in uu yiraahdo in uu ka hadlo hawada hargeeysa ee ay saas u kala gooshayaan Diyaaradaha xamar ka soo amar qaatay.Dhawr casho ka hore waxaa la soo qoray in saacaddiiba ay hargeeysa dul maraan ugu yaraan 12 diyaaradood oo ah kuwa ganacsiga oo laga kala leeyahay adduun weynaha.
2.Xaaji -Jeeganoow horaan kuugu iri war kolba waad soo noqonaysaye dee haddeerba iska imoow oo halkaan an kuu salaxee oo isaga qayil.War xaggeed tagaysaa illaa beero iyo bad kama shaqaysataane.Wax la idiin keeno ma ahee wax idiin baxa ma cuntaan sida badan.War macaawinada xoogaagaa ee uu idin siiyo Ingiriisku dhawaan way go’aysaa ee ku soo laabta dadkiina soomaaliweeyn oo wax la qaba.
Alleyle waxbaa ka dhacay! War xaaji saalax maxaa kuu baxay? kkkkkk
Ninkii Siyaad Barre iyo Faqashba waa soo noolaadeen maistiri? kkkkkkkk
Kan soo xaday magaca Gabar Harti hadalkaagu qeymo ma leh oo ma istaahishid jawaab san.Haddiise an in yar kaa iraahdo caydaada.War dadkaad cayday wadamadooday kala dagan yahiin oo sidiina oo kale har iyo habeen kuma jiraan Qaylo iyo waa wareey waa nala haystaa iyo waxbaa naloo diidan yahay.War kan markastaba qeylinayaa waa daiga oo la meel ceshata.Haddii ad wax tahay maad aamustid oo isdabiretid?Maxaad ugu haysaa xamar baa CUNAHA NAGU DHAGAN oo JIDKASTAA INA FARMAAJO NOO FARIISTAY?
Ugu dambayn waxaan filayaa in aad tahay kii soo qoran jirey somalilander.
Mansha Allah qabiil iyo qaran isku mid ah, mar walba qaranku waa inuu caawiyaa shacabkiisa, maamul beeleedka iduur waxa weli horboodaya odoyashii SNM kuwaasoo dadka beenta run uga dhiga, xaqiiqadana Ka marin habaabiya, haddaba waxa loo bahan yahay in dawladda federalka somalia 🇸🇴 marwalba Ka caawiso shacabka la haysto waxyabaha daruuriga u ah noloshooda.
Qarana ha lahaane meeday tii beeshaada?Taadii badan faro ku hayn markaasaad ka hadlaysaa qaran waa hore lagu kala tagay.Qarankii soomaaliweeyn waxaa kufsatay oo faro xumaysay USC.Walina dharkii kuma ay celin oo waa kuwaas shacabkooda masaakiintaa la dabo taagan Bomka iyo Baasukaha.Calaa kulli xaal kuwaas qaran lama wadaagaysida ee ka shaqayso gurigaaga.Mooryaan adigaa ka xoolo badan oo ka dhul fiican ee waxba ha u hanqal taagin dhankooda.
Ugu dambayn maanta lama hayo qaran u wada dhaxeeya soomaaliweeyn.Yaan lagugu qaldin Qaranka soomaaliya.Qarankii soomaaliweeyn wali sooma noqon.Dhulkaagu waa dhul xoolaad iyo dhul beereedba ee ka shaqayso.war xamar diiday qaran soomaliweeyn ka wada dhaxeeye ee qodo dhulkaaga.Allaah (swt) ha ina gaarsiiyo markii la helo qaran xalaala oo ka madax banaan xujoojinka USC.
Atoore kala hadal badanaa. Nina Qaranbuu ugu goodinayaa. Midna Qaran lagu kala tegay ayaad ka hadleysaa ayuu leeyahay.